Mike Tyson Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
musha nyika dzakabatana Mabhokisi Mike Tyson Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Isu tinopa Iyo Yakazara Nyaya yebhokisi ngano ine zita remadunhurirwa "Iron Mike".
Yedu vhezheni yeMike Tyson's Biography uye Childhood Nyaya inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa ezviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Mike Tyson Yehucheche Nyaya.
Jarrell Miller Mwana Wenyaya Nyaya Yacho Plus Untold Biography Facts
Hongu, munhu wose anoziva iye ndeimwe yevanorema zvikuru boxersers munhoroondo. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nhoroondo yaMike Tyson iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Mike Tyson Yehucheche Nyaya - Hupenyu hwepakutanga uye Mhuri kumashure:
Kutanga kubva, Michael Gerard Tyson akazvarwa pazuva rechimakumi matatu raChikumi 30 kuBrownville, kuBrooklyn, New York.
Floyd Mayweather Nyaya Yehuduku Plus Untold Biography Facts
Aive wechitatu pavana vatatu akazvarwa naamai vake, Lorna Smith uye kuna baba vake, Jimmy Kirkpatrick. Hoyo vabereki vaMike Tyson.
Vabereki vaMike Tyson Lorna naJimmy.
Nyika yeAmerica yeBlack dzinza neAfro-America neJamaican midzi yaive nemwedzi mishoma baba vake pavakasiya mhuri.
Nekuda kweizvozvo, Tyson aive asina-ruoko akasimudzwa naamai vake kuBrownsville kwaakakurira pamwe chete nemukoma wake, Rodney Tyson uye mukuru hanzvadzi, Denise Anderson.
Mudiki Mike Tyson akakurira kuBrownsville kuBrooklyn.
Kukurira kuBrownsville iyo yaizivikanwa nekuwanda kwehutsotsi panguva iyoyo, mudiki Tyson aishungurudzwa uye aigara achibirwa nevakomana vakuru kwaari, kusimudzira kwakamuita kuti anzwe asina simba uye asina simba.
Mike Tyson aigara achishungurudzwa mukati memakore ake ekuumba.
Pakazosvika nguva Tyson akange ave nemakore gumi nemasere, akanyoreswa muchikwata chematsotsi kwaakazvisimbisa sembavha yekumba uye muhomwe.
Hazvina kutora nguva refu asati apinza kurwa mumigwagwa mukutengeserana kwake kwaizivikanwa nedonzvo rekuzvidzivirira pakada kudiwa.
Mike Tyson Dzidzo:
Kunze kwekuve murwi wemumugwagwa Tyson aivewo mushandisi wezvinodhaka. Akatanga kuedza cocaine paakanga akura 11 uye akapfuurira kuita zvisina kufanira kwayo kwemakore akawanda.
Kutora nguva muzvivakwa zvevechidiki kwakakurumidza kuve zvakajairika kumudiki izvo aizozoti makore gare gare azvitsanangure se "nguva-mugove".
Deontay Wilder Yevacheche Nyaya Yenyaya Uye Untold Biography Chokwadi
Mike Tyson akasungwa kanoverengeka achiri mudiki uye akapedza nguva muzvivakwa zvevechidiki.
Muchokwadi, yaive mune imwe yenzvimbo dzevechidiki dzakadai dzinodaidzwa kunzi "Tryon Chikoro cheVakomana" Tyson aive nechikamu chedzidzo yake yechikoro chepamusoro pamwe nekuratidzira hunyanzvi hwetsiva hwakabata pfungwa yemupi wezano rekuchengetwa kwevechidiki anozivikanwa saBobby Stewart.
Aive Bobby Stewart uyo akakudza hunyanzvi hwaTyson wetsiva asati aunza mutambo wetsiva kune maneja ane hunyanzvi uye mudzidzisi, Cus D'Amato.
Mike Tyson Biography - Hupenyu hwepakutanga muBhokisi:
Pasi pekutungamira kweD'Amato, Tyson akakura kuita mutambi wetsiva akabudirira uye akawanikwa aine hunhu hwakakodzera.
Akawana nzvimbo mumakwikwi e1981 Olympics kwaakahwina menduru yegoridhe nekukunda Joe Cortez.
Mudiki Tyson nemaneja wake D'Amato.
Achiratidza kuti kubudirira kwake kwekutanga kwanga kusiri kwekutamba, Tyson akabata menduru yake yechipiri yegoridhe nekukunda mumwe Kelton Brown mumaOlympics a1982.
Pamusoro peyekutanga basa rake rekutanga, Tyson akapokana naHenry Tillman kaviri asi akatadza kukunda muAmerica.
Mike Tyson Biography - Rwendo rweMukurumbira:
1984 ndiro gore iro Tyson akarasikirwa nemurairidzi wake kusvika padyo nemaoko erufu.
Rufu rwaAmato rwakanyanya kurwadza Tyson nenyaya yekuti maneja wemushakabvu akawedzera zvakapetwa kaviri semuchengeti kana madzibaba avo vakapa hupenyu hwaTyson gwara rine zvibereko.
Amato aireva zvakawanda kuna Tyson. Nekudaro, kufa kwake kwakasiya mutambi wetsiva apererwa.
Semaneja, Amato aigara achisimbisa kuti Tyson aive "Murwi akanakisa munyika" uye wechidiki akakura muchibvumirano ichocho.
Hameno kuti vazhinji vakakasira kutaura matambudziko akazotevera aTyson kusvika pakumira kwemaitiro akanaka aive ambopihwa naAmato.
Mike Tyson Biography - Nyaya Yekubudirira:
Achienderera mberi, Tyson akatendeuka nyanzvi mu1985 uye akaita nyanzvi yake yekutanga semakore gumi nemasere ekuzvarwa pa18th yaKurume gore iroro.
Andy Ruiz Jr Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts
Aive nemarwa makumi maviri nemasere mugore rake rekutanga uye akahwina makumi maviri nematanhatu, achizvisimbisa setarisiro yemakwikwi eheavyweight.
Mushure mekukunda kurwa kwake kwekutanga paterevhizheni munyika yose achirwa naJesse Ferguson muna Kukadzi 1986, Tyson akawedzera kukunda kwe6 kune rekodhi yake asati akunda Trevor Berbick mumutambo wetsiva weheavyweight muna Mbudzi 22 1986.
Nekukunda uku, Tyson, ane makore makumi maviri nemwedzi mina, akave shasha yegotwe reheavyweight munhoroondo.
Mike Tyson akakunda Trevor Berbick kuhwina rake rekutanga Heavyweight zita muna 1986.
Mike Tyson Dating History:
Mike Tyson ave akaroora katatu. Tinokuunzira chokwadi nezve michato yake uye yazvino hukama hwehukama.
Kutanga nehupenyu hwake hwekare hwewanano, Tyson akatanga kuroorwa nemutambi weAmerica, Robin Givens.
Yavo yaive mubatanidzwa waingogara kwegore (1988-1989) vasati vaenda nenzira dzakasiyana. Nekuda kweizvozvo, hapana mwanakomana (vana) kana mwanasikana (va) akaberekwa mumubatanidzwa.
Mike Tyson akange akaroora Robin Givens pakati pe1988-1989.
Makore mushure mekuroora kwake kwekutanga, Tyson akatanga kufambidzana nemugari wevana, Monica Turner. Vakaroora pa9th yaApril 1997 uye vakave nekuita vana vaviri - Rayna Tyson (mwanasikana) naAmir Tyson (mwanakomana) - vasati varambana mu2003.
Mifananidzo yaMike Tyson nemukadzi wake wechipiri Monica Turner.
Nezve ake ehukama hwehukama, Tyson akaroora kuna Lakiha Spicer. Vakaroora vakafamba pasi munzira muna Chikumi 2009 vanga vari kuburikidza nehurefu uye hutete pamakore asi vakawana zvikonzero zvekunamatira pamwechete.
Muchato wavo wakakomborerwa nevana vaviri. Vanosanganisira mwanasikana, Milan Tyson (iye zvino anonoka) uye mwanakomana, Morocco Tyson.
Mike Tyson ari muhukama hwewanano naLakiha Spicer panguva yekunyora.
Zvakakosha kuziva kuti Tyson anewo vana kunze kwechato. Vanosanganisira Mikey Lorna Tyson (mwanasikana wake wokutanga) Miguel Leon Tyson (mwanakomana) naEksodus Tyson (mwanasikana).
Mike Tyson Hupenyu Hwemhuri:
Mike Tyson anobva kumhuri yakaderera-kirasi kumashure. Tinokuunzira chokwadi nezvehupenyu hwemhuri yake.
Nezve baba vaMike Tyson:
Jimmy Kirkpatrick aive baba vaTyson. Akasiya mhuri nguva pfupi mushure mekuzvarwa kwaTyson.
Nekuda kweizvozvo, mutambi wetsiva akarega basa haana ndangariro dzababa vake chaivo. Zvisinei, Jimmy aizivikanwa semutambi wepamusoro we baseball panguva yehudiki hwake uye munhu ari nyore kuenda kusvika parufu rwake mu2001.
Baba vaMike Tyson Jimmy Kirkpatrick.
Nezve amai vaMike Tyson:
Lorna Smith aive amai vaTyson. Kusiyana nemadzimai mazhinji, aive nehunhu hwakashata muhupenyu hwaTyson (s) uye anonzi akamupa zvinodhaka nedoro munguva yehupenyu hwake hwepakutanga.
Kunyangwe Tyson aida amai vake, anoyeuka kuti rudo rwake haruna kudzorerwa, Uye haana kukosheswa naamai vake munzira yekunyora kubudirira kusvika parufu rwake muna 1982.
Amai vaMike Tyson Lorna Smith.
Nezve Mike Tyson's Sibling:
Mike Tyson achingova nemunin'ina uye hanzvadzi. Ivo vanosanganisira mukoma wake mukuru Rodney Tyson uye mukuru mukoma Denise Anderson.
Rodney ane makore mashanu mukuru kuna Tyson uye anoshanda saTrauma Surgeon ukuwo Denise aive hanzvadzi yaTyson chete.
Anonzi aive padyo nemutambi wetsiva uyu panguva yehudiki hwake ainetsekana uye akaramba aine hukama naye kusvika afa nekenza muna1990.
Mike Tyson mukoma waRodney uye munin'ina hanzvadzi Denise.
Nezve hama dzaMike Tyson:
Kure kubva kumhuri yaTyson yepedyo zvishoma zvinozivikanwa nezvesekuru nasekuru vake pamwe nasekuru vake nasekuru naambuya.
Saizvozvowo, hakuna kumbotaurwa nezvevatete vake, babamunini, babamunini pamwe nababamunini. Kana hama dzake hadzina kuzivikanwa muzviitiko zvinozivikanwa kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Mike Tyson Hupenyu hweMunhu:
Chii chinoita kuti Mike Tyson afare? Gara kumashure apo isu tinokuunzira iko kugadzirwa kwehunhu hwake kukubatsira iwe kuti uve nemufananidzo uzere wake. Kutanga, Tyson's persona isanganiswa yeCancer Zodiac maitiro.
Iye anopinzwa mukati, akatsiga, akadzikama, akasimbisa uye asinganetse anopa ruzivo rwune chekuita nehupenyu hwake hwepachivande uye hwakavanzika.
Zvaanofarira uye zvaanofarira zvinosanganisira mujaho wenjiva, kurera mhuka dzinovaraidza, kutamba chess uye kushandisa nguva yakanaka neshamwari nemhuri.
Muchokwadi, Iyo Legendary Bhokisi seChess sezvakangoita Vitali Klitschko, Mike Tyson, Conor McGregor, Justin bieber, Jason Statham, ASAP Dombo, uye Late Heath ledger, Etc.
Mike Tyson Mararamiro:
Iyo Boxing Legend ine inofungidzirwa mambure emadhora mazana matatu emamiriyoni panguva yekunyora. Ari pamusoro pebasa rake retsiva, Tyson aimbokosha mari inodarika mazana matatu emamiriyoni emadhora asi akashandisa mari iyi zvine mutsindo ndokuzivisa kubhuroka muna3.
Nekudaro, ngano inoramba ichigadzira nzira dzekuchengeta musoro wake pamusoro pemvura sezvaanorarama hupenyu hweumbozha mukati mezvaanogona.
Humbowo hwemararamiro akadai hunosanganisira kuva neMusha weLas Vegas unokosha madhora mazana maviri nemazana mashanu emadhora. Imba yeumbozha inogara pazvitatu-zvina zveeka uye ine zvivakwa zvedeluxe senge gorofu, media room pakati pevamwe.
Kuva mumwe ane kuravira kwakanaka mumotokari Tyson anodada ane mashoma emota dzisingaite mukuunganidza kwake. Ivo vanosanganisira Aston-Martin Lagonda, Ferrari 456 GT Spyder pakati pevamwe.
Chiono chechikamu cheMike Tyson's $ 2.5 miriyoni yemusha paVegas.
Mike Tyson Chokwadi:
Kuputira mitsetse yedu Mike Tyson ubwana uye biography pano ndezvechokwadi izvo zvisingawanzobatanidzwa muhupenyu hwake.
Mike Tyson akaberekwa muKristu asi akabvuma chiIslam sechitendero panguva yekuiswa mujeri mu1992.
Iye ane Maori murwi tattoo kumeso kwake uye kumeso kwemutungamiri weChinese, Mao kuruoko rwake rwerudyi. Mamwe maTattoos anosanganisira iyo yeMarxist Revolutionary, Che Guevara pambabvu dzake pamwe nechiso chaArthur Ashe paruoko rwake rweruboshwe chine mazwi "Mazuva eNyasha".
Kuongorororwa kwematatu makuru aMike Tyson.
Iyo ngano ichiri kuita yake yekare-tsika yekuputa uye kunwa panguva yekunyora uye haatarike kunge akagadzirira kurega chero nguva munguva pfupi.
Kunyange zvazvo yakareba mujeri, Tyson achiri kubatanidzwa mubhodhi. Akabva atanga nekambani yekusimudzira mabhosi "Iron Mike Productions" pamwe nekubatana na CEO weAcquinity Interactive Garry Jonas munaAugust 2013.
Mike Tyson kunze kwemahara logo ye Iron Mike Production. Iwe unoona here kumeso kwake tattoo teki pane iyo Logo?.
Ndiye anogamuchira mibayiro yakawanda. Dzinosanganisira Ring Magazine Fighter Award, BBC Sports Personality of the Year Awards, Ring magazine Prospect of the Year Award, uye Doctorate mu Humane Tsamba kubva kuCentral State University, nezvimwewo.
Mike Tyson Biography Vhidhiyo Pfupiso:
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Mike Tyson Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At childhood biography, isu tinovavarira chokwadi uye kururamisira tichikupa iyo Biography ye United States Mabhokisi.
Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!
Childhood Biography Diary- yeAIDS BOXERS
Chokwadi zvinoshamisa !! Iye ingano zvakare murume ane tarenda. Ndinoshuva kuti paive nezvakawanda nezverudo rwake rwejiva. WAITA HAKO!!